अक्षय कुमारले आफ्नी छोरीको अनुहार किन लुकाउन चाहन्छन् ? यस्तो छ रह:स्य… – Taja Khawar
अक्षय कुमारले आफ्नी छोरीको अनुहार किन लुकाउन चाहन्छन् ? यस्तो छ रह:स्य…
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८ समय: १६:०२:०४
June 29, 2020 17196
बलिउडमा सुशान्त राजपुतको नि’ पछि परिवारवा’दको वहस सुरु भएको छ । फिल्मी क्षेत्रमा रहेका बुवा’आमाका छोराछोरीले फिल्ममा चर्चा कमाउने तर फरक क्षेत्रवाट आएका कलाकारले अवसर नपाउने भएका कारण सुशान्तले यस्तो निर्णय गरे’को भन्दै वहस सुरु भएको हो ।
तर बलिउडका अर्का हस्ति अक्षय कुमार भने आफ्नो छोरीको अनुहार क्यामेराको सामुन्ने देखाउन चाहन्नन् ।फिल्मी कला’कारको परिवार र उनको छोराछो’रीको बारेमा सबैलाई चासो हुन्छ । करिना कपुर र सैफअलि खानका छोरा तैमुर सानै उमेर’मा चर्चीत भएका छन् ।
उनको तस्बिर र भि’डियो सामाजिक सञ्जाल’मा निकै भा’इरल हुनछन् । तर अक्षयकुमार भने यो सबै कुरा भन्दा फरक छन् । उनी आफ्नो छोराछोरीका बारेमा बा’हिर कुरा पनि गर्दैनन् र उनीहरुलाई क्यामेरा सामुन्ने पनि ल्याउँदैनन् ।
अक्षय कुमारका फिल्म पारिवारिक हुन्छन् । उनी फिल्ममा जस्तै निजि जिवनमा पनि आफ्नो ब्यक्तिगत जिवन र परिवार’लाई लिएर निकै संवेद’नशिल छन् । उनले आफ्नो छोरी नितारालाई कहिल्यै पनि क्यामेराको सामुन्ने ल्याउँदैनन् । उनी नितारालाई कला’कार बनोस् भन्ने द’वाव नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।
फिल्मी दुनिया र क्यामेराको सामुन्ने आएप’छि हुने चर्चाले उनको छोरीलाई असर नहोस् भन्ने कु’रामा निकै होसियार रहेका अक्षय छोरीले आफुले चाहेको काम गरोस भन्छन् । त्यसैले पनि उनी छोरी कलाकारनै बनोस् भन्ने इच्छा राख्दैनन् ।
जसका कारण उनी छोरी’लाई फिल्मी दुनिया र क्यामे’रावाट लुकाएर राखेका छन् । अहिले बच्चाबच्चीको अध्ययन गर्ने समय भएका कारण उनीहरुको समय खेल्न र अध्ययन गर्नमै वितोस् भन्ने चाहन्छन् ।फिल्मी क्षेत्रमा फिल्मी क्षेत्र’मा रहेका कलाकारका छोरा’छोरी पनि अधिकांश कलाकार नै बन्ने गरेका छन् ।
तर अक्षय भने फरक चाहन्छन् । उनी आफ्नो’ छोराछोरीले फरक क्षेत्र रोजुन् भन्ने इच्छा राख्छन् । फिल्मी क्षेत्रका कलाकारका छोराछोरी प्रति मिडिया र सा’माजिक सञ्जालमा हुने कौतुहल’तावाट उनी आफ्ना सन्तानलाई टाढा नै राख्न चाहन्छन् ।
उनी आफ्नो छोरा सर्वसा’धारणका छोरा’छोरी जस्तै स्वतन्त्र भएर अध्ययन गरोस्, उसलाई स्टारको छोरी भन्ने अनुभव नहोस् । छोरीको बालापन नखोसियोस् भन्ने कुरामा उनी निकै सम्बे’दन शिल छन् । उनी सर्वसाधारणको बाल’बालिकाले जस्तो जिवन आफ्नो छोरीले पनि साधारण तरिकामै विताओस् भन्ने चाहन्छन् । – एजेन्सी
Last Updated on: August 1st, 2021 at 4:02 pm